Madbacadda Somaliland ma dabooli kartaa baahida daabacaad ee looga fadhiyo? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Madbacadda Somaliland ma dabooli kartaa baahida daabacaad ee looga fadhiyo?
Madbacadda Somaliland ma dabooli kartaa baahida daabacaad ee looga fadhiyo?
Dhawaan ayaa xukuumadda jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland waxay burrisay dhammaan wixii heshiiyo hore ahaa ee ay sharikado gaar ah hore ugula gashay soo daabicidda dukumentiga leh qiimo lacageed sida Baasaboorrada , laysimada wadidda gaadiidka, buugaagta gawaadhida , iyo waxyaabo kale.
“Dhamaan wixii daabacaad ah ee qaranku leeyahay waxaa u xil saaran madbacadda, wayna awooddaa nooc kasta oo dukumenti ah in ay daabacdo marka laga reebo baasaboorka oo u baahan in laga kabo, arrintiisana ay isaga imaanayaan madbacadda qaranka iyo wasaaradda maaliyadda” ayuu yiri Siciid Saalax.
Shaqaalaha madbacadda waxay u sheegeen weriyaha BBC ee Hargaysa Axmed Siciid Cige in ay mararka qaar shaqeeyaan ilaa 12 saacadood.
Previous articleDawlada Soomaaliya Oo Go’aan Adag Siyaasada Kaga Mamnuucday Sheekh Mukhtaar Roobow
Next articleDaawo, Adna aadan ismaacii, oo qadiyadii somaliland ku dhegsanayd e madaxbanaanida dhiiga badani ku daatay si fudud u fur furtay